काठमाडौँ,भदौ २९ ।। अब करोडौँ सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गराउने प्रवृत्ति अब बन्द हुने भएको छ। संसदले शुक्रबार विदेशमा गरिने उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने प्रावधानसहितको जनस्वास्थ्य विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
गर्नुपर्दा सरकारले खर्च नब्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ।अब संसदले प्रस्तावित ऐन पारित गरेपछि प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जेसुकै भएपनि सरकारले विदेशमा उपचार गर्न रकम उपलब्ध गराउने छैन। राज्यले विशिष्ट वा अरु कुनै नाममा गरेको विभेद अन्त्य हुनेछ भने निति निर्माता र शासन संचालन गर्नेहरूले सरकारी कोष दुरुपयोग गरेर विदेश उपचार गर्न जाने कुरा अन्त्य हुनेछ। स्वदेशी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर वृद्धि हुनेछ।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारले नयाँ कानुन निर्माण गरेको हो । शुक्रबार संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको यो ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुने भएको छ।
संसदबाट पारित भएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा प्रष्टसँग कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गर्ने उपचार खर्च नब्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो विधेयकमा ‘प्रचलित कानुनमा जे कुरा लेखिए पनि कुनै व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले राज्यकोषबाट व्यहोर्ने छैन,’भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘जनस्वास्थ्य विधेयक को पुर्णपाठ हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस् जनस्वास्थ्य विधेयक
सोच र क्षमतामा बादल लागेको गृहमन्त्री हामीलार्इ चाहिन्छ र ?
हिम्कु खोलाले बगाउँदा ताइवानका पर्यटक बेपत्ता
जनप्रतिनिधिकै घरमा स्थानीय सरकार !
हत्यारा ‘गो ब्याक’ भन्दै अमेरिकामा डा. बाबुराम भट्टराईको बिरोध (भिडियो सहित)
तपस्वी बम्जनले आनीलाई बलत्कार गरेको आरोप !
आजका सात कार्टुन !
मुख्यमन्त्रीलाई बालुवाटारमा निषेध !
निर्मला हत्याकाण्डः २ डीएसपीसहित ४ प्रहरी निलम्बनमा